SBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 24, 2019 – Kichuu
HomeAfaan OromooRadioSBO Sagalee Bilisummaa Oromoo, Bitootessa 24, 2019
Via Caalaa Hayiluu Abaataa, Bitootessa 24, 2019
#Kijiboota dhihoo kana #Jawaar Minisootaa fi Caanadatti kijibe keessaa muraasa
1. “Bilisoomnerra kanan jedhe akka dur namni nama hidhuu fi adamsu hin jiru jechuu kiyya. Kanammoo sinuu gartan mitiiree?
Hubadhaa yeroo ammaa Oromoota 3500 caalatu manneen hidhaa akka Adaamaa, Sanqallee, Finfinnee, Malka Waakkannaa, Dillaa, Bulee Horaa fi Xoollay keessa jira. Isaan kunneen namaa mitii? Yakka maalii hojjatanii hidhaman? Moo isaanif bilisummaan dhufe hin jiru?
Duris taanan sirna sana kan deeggaru akka barbaadetti bahee galaa hin turree??
2. “Duraan reenfa ijoollee Oromoon naxxansee sin kakaasee dammaqsaa ture, amma garuu kana kanaan dhiisef Oromoon Oromoo ajjeesa jedhee maxxansuun waan qaanessaa ta’eefi.”
Kuni Kijiba adiidha.
Dhugaan jiru garuu kan armaan gadiiti.
Oromoo miti kan oromoo ajjeesaa jiru. Maaliif jenna?
A. Kan Oromoo ajjeesaa jiru Humna waraana Raayyaa ittiisa XOOPHIYAA ti. Kaleessas kan Oromoo ajjeesaa ture isaanuma.
Kaeessa Saamooraatu hoogganna hardha immoo Tsaaree Mokkonnontu hooggana.
Kaleessa Mallasaatu akka ajjeesan qajeelcha kenna hardhammoo Abiy Ahmeditu qajeelfama kenna.
Hunda caalaa Oromoo xayyaaran rukkuchiise, akkamitti namni mirga namoomaf falmu kana balaaleffachuu dhiisa?
Kana malees WBO bosona jiru caalaa kan abdachuu qabnu waraana Xoophiyaati jedhe. Kana Oromoofan dhiisa!
B. Ijoolleen Oromoo waan Oromoo ajjeessuu didaniifi WBO waliin dhaabbatanii daangaa Oromiyaa tiksaniif poolisoonni Oromiyaa hardha amnneen hidhaa Sanqallee fi Xoollay jiru.
C. Oromoo kan bitaa jira tiksitoota Impaahera Xoophiyaa fi sirnichaati malee bakka buutota Oromoon ofii filateenii miti. Warra akkasiitin Oromootu Oromoo ajjeesaa jira jechuun afaan faajjii uumuu fi oromoo dagachiisudha.
3. “Godinoota Wallaggaa 4, Gujii Bahaa fi Lixaa akkasumas Boorana walii galee kan gabroomsaa jiru ABO fi OPDO!” jedhe.
Namni yaaduu dandahu yoo ololaaf taate malee kijiba darree akkasii watajiiirratti hin odeeessu.
ABO’n ofiisaafuu waanjiraaleen isaa 27 jalaa cufamee, mirgi sochii fi gahgeessummaasiyaasaa mulqamee akka hidhamaatti magaala Finfinnee keessatti hoogganni isaa bakka ugguramee jirutti, bakka hooggantoonni, qondaalonnii fi miseensonni akasumas deeggartoonni ABO admasanii hidhama jiranitti, bakka ABO qondaalota isaafuu wabii tahuu dhabee dararaa hamtuu keessa jiranitti (fufeera: Gammachuu Ayyaanaa) akkamiin ABOn OPDO waliin tahee Oromoo ganroomsa jedhee ABO maqaa xureessaa? Ni fakkaataa? Gaafa barbaade OPD tti imaana kennanne akka nu ceesisaniif jedha. Gaafa fedhemmoo Alamuu simeetu Oromoo hidhaa jira jedha gaafa kaanimmoo ODP keessaa namnuu hin jiru akka diqaalaa Baaqelaa LAMMAA fi ABIY Rabbiin keessa buusef malee OPDO dullattii dha jedha. Maalif hamma kana uummata burjaajessuun barbaachise?
4. “WBOn akka hin galleef shoora guddaa kan taphate DAAWUD, MARROO FI GOOLLICHA caalaa ALAMUU SIMEE ti.”
Asirrattis haqa haqanqaalee yakka sichi seenan isa gaafatuuf teessu maqsuuf jedheet #scapegoating fayyadamuu isaati. Araara kana warra booreesse keessaa hangafni Jawaar Mohaammed. Bakka barbaade deemee haasawaan inni gochaa ture hunduu WBO xiqqeessuu fi duula maqa balleessii ture. Gama biraatin Jawaar bara 2009 irraa regale nama ABO fi WBO irraatti duulaa turee fi erga OMN illee jalqabe sagalee WBO nama ukkaamsaa ture ta’ee, OMN irratti sagalee WBO ukkaamsee akkamiin inni jaarsa araaraa tahee araarsuuf aggaama?
Kanas taheemmoo hooggantoota WBO waliin haasawuu waan hin feenef qondaalota WBO Gadi aanoo fi abbootii sagalii bilbilaan gowwomsee galchaa ture.
Gama biraatin imaanaa ABOn Abbootii Gadaa Oromoo, haadholii siiqqee fi akkasumas Qeerroo Oromoo tti kenne cabsuun aangoo fi beekkmatii Abbootii gadaa cabsuun marii baldhaa hiree WBO irratti uummanni akka hin mariyanne hochuuun WBO harka kennachiisee hardha isaan Xoollayiti darbachiisee ofiisaatii Kaanadaa fi USA keesaaa olola tuffi oofa.
Kun hunduu tuffii jaarmiyaa fi uummata Oromooti.
Walumaa galatti Alan dubbii laaqaaa ture osoo beekuu koree araaraa keessa seenun kan WBOn akka hin galle godhe Alamuu simee duwwaa osoo hin taane innis godheera. Hundattuu WBOn kaayyoo manaa baheef fiixa baasu malee hin galuuti ijibbaadhu!
“ ani kaappitaalistiidha, kanaafuu sirraa maallaqa fi yeroo qofa sirraa barbaada; kanaan ala homaa walirraa hin qabnu.” Jedhe qofa.
Bara 2015 jecha kana jedhee ture….
Oromoo fi sabboonummaan gatii Hin qabu bakka qarshiin hin jirretti jedhe. Kanaaf seenaa Oromoo keessatti namni Oromoon mindeessitee ‘qabsoo’ gaggeesse isa qofa jechuu dha!